मुन्टाे निहुर्‍याएर बसिरहने स्वेता बाल क्लबमा आएपछि यसरी बदलिइन्
- श्वेता गुरुङ
साथी, तपाईंले ठूला पार्टी ठूला संगठनमा आबद्ध भएर परिवर्तन भएका मानिसहरु त धेरै देख्नु भएको होला । हाम्रै नेताहरु नै हेर्नुस् न पार्टीमा लागेर संगठित भएर राजनीति गर्न थालेपछि कति धनी र चर्चित बने । केही निष्ठापूर्वक राष्ट्र सेवामा लागे भने केही बुद्धिजीवी भएर पनि निस्किए ।
तर तपाईंले सुन्नु भएको छ ? साना-साना बालबालिकाहरुले पनि साना-साना संगठनहरु बनाएर आफैँलाई परिवर्तन गर्न सक्छन् भनेर ?
सुन्नु भएको छैन भने मैले देखेको एक जना बहिनीको कथा म यहाँ हरुलाई सुनाउँछु है त ?
नेपालगन्जकी स्वेता गुरुङ सानै देखि लजालु, डराइरहने, कसैसँग नबोल्ने, एक्लै बस्ने गर्दथिन् । हामी विद्यालय जाँदा साथीहरुसँग रमाइलो गर्दा उनी भने एक्लै बस्ने गर्दथिन् ।
सामान्य परिवारकी कान्छी छोरी भए पनि उनी बाहिरी दुनियाँसँग भिज्न डराउने गर्थिन् । उनलाई समाज के हो, मान्छेहरुसँग कसरी बोल्नु पर्छ भन्नेबारे केही थाहा थिएन । थाहा थियो त केवल गुडियासँग खेल्न, विद्यालय जान र आफ्नै दुनियाँमा रमाउन ।
उनी कोही अपरिचित व्यक्ति देख्दा डराउने गर्थिन् र प्रहरीलाई देख्दा झनै डराउने र भाग्ने गर्थिन् । झन कसैको अघि बोल्नु परे उसको मुटुको धड्कन बढ्थ्यो । उनी आत्तिन्थिन् र रुन पो लाग्थिन् । हामी सबैले सम्झाए पछि बल्ल रुन छोडेर आफूलाई लागेको कुरा भन्थिन् ।
डराउने भएकै कारण हरेक दिन उनी कक्षा कोठामा पछाडि बस्थिन् । केही बोले गलत होला कि, कसैले केही भन्ला कि, हाँस्लान् कि भनेर यस्तै यस्तै भावनाले उनले खुलेर बोल्न सकिनन् ।
त्यत्तिकैमा हाम्रो समुदायमा बाल क्लब गठन गर्ने भनियो । बाल क्लब गठन गर्न आउने मिसले उनलाई जबरजस्ती भए पनि क्लबको सदस्यमा राखिदिनु भयो ।
उसैगरी हामी सबै बोलिरहँदा पछाडि शिर निहुराएर बस्ने गर्थिन् । तर दिनहुँ जसो क्लबमा वैठक बस्ने, आफूले जानेको कुरा साथीहरुलाई सुनाउने र मिस-सरहरु आएर हौसला साथै विभिन्न प्रकारका तालिम दिन थालेपछि भने उनमा परिवर्तन आएको देख्न थाल्यौँ ।
उनी त हाँसेर साथीहरुसँग आफ्ना हक अधिकारका बारेमा कुरा पो गर्न थालिन् । त्यतिमात्र हो र ? बालबालिकाहरुलाई अधिकारकोे बारेमा जानकारी दिन थालिन् ।
यसरी उनी नेपालगन्ज नगरस्तरिय बालक्लब संजालको संस्थापक सचिव हुँदै जिल्ला बालक्लब सञ्जालको अध्यक्ष समेत बनिन् । हिजो नाम भन्न पनि डराउने रिता आज सयौँ बालबालिकाको नेतृत्व गर्दै हकहितको निम्ति लड्न पो थालिन् ।
सानोमा बोल्न डराउने, प्रहरीसँग डराउने उनै बालिका अहिले प्रहरीसँग काँधमा काँध मिलाएर बाल शोषण, हिंसा अन्त्य गर्न लागि परिरहेकी छन् । उनी एक अभियन्ता मात्र बनिन् समाजमा बालक्लबको महत्व पनि दर्शाउन सफल बनिन् ।
अहिले उनी युवा अवस्थामा छिन् र उनले बाल अधिकारको क्षेत्रमा वकालत गर्दै छिन् । अहिले उनी प्रहरी, सरकारी निकाय र अन्य संघ संस्थाहरूसँग मिलेर काम गर्छिन्। बालबिवाह, बालश्रम, दुर्व्यवहार, महिला हिंसा, तेश्रो लिङ्गी लगायतको अधिकारको लागि लड्ने गर्छिन् भने सामाजिक कुरीति विरुद्ध समाजमा जनचेतना फैलाउने काम गर्छिन् ।
लौ त साथीहरु कथा चाहिँ यति नै हो । थाहा पाउनु भयो त ? कसरी रिता बालक्लबमा लागेर समाजकै नेतृत्व गर्ने भइन्, अनि प्रहरी भनेपछि डरले काप्ने उनी प्रहरी सँगै हात मिलाएर हिड्न सक्ने भइन् ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, कात्तिक २६, २०७७, १०:४९:००